Wadahadalladii Rooble iyo Farmaajo oo burburay | KEYDMEDIA ONLINE
Wada-hadalladii u socday Rooble iyo Farmaajo, ayaa burburay, kadib markii uu Farmajo diiday in uu muujiyo tanaasul si la isugu soo dhawaado.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wadahadalladii ay garwadeynta ka ahaayeen Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa ugu danbeyn burburay xalay xilli danbe, kadib markii Kooxda Farmaajo diideen xalka qodobbada lagu muransanaa.
Farmaajo, wuxuu diiday in kiiska Ikraan loo daayo maxakamadda, isla-markaana qoysku sii wataan dacwada ay xeer-ilaalintu ka qabatay, guddigii uu Ra’iisul Wasaraha u saaray kiiskana loo daayo baaritaanka maadaama ay kalsooni ku qabaan ehellada Ikraan.
Guddigii dhexdhexaadinta, waxa ay soo jeediyeen in Wasiir Amniga Cabdullahi Maxamed Nuur, loo baddelo middii uu Ra’iisl Wasaaruhu u garto 25-ka Wasaarad ee Xkuumadda, hayeeshee, qodobkaas, Kooxda Farmaajo, waa ka hor yimaadeen, waxayna soo jeediyeen in Wasaaradda Ganacsiga la geeyo Wasiir Cabdalla, taas oo RW Rooble, ku tilmaamay faragalin lagu sameynayo Xukuumaddiisa.
Qodobka kale, ee la isku fahmi waayay, ayaa ah in Gen. Bashiir Goobe, si KMG ah u sii hayo xilka agaasinaga NISA, inta laga magacabayo hoggaan labada xaafiis isla ogoolyihiin, ama soo gabagaboobayaan doorashooyinka dalka.
Farmaajo, wuxuu ku adkeystay in Yaasiin Farey, sii hayo hoggaanka Hay’adda Nabad-sugidda iyi Sir-doonka Qaranka, taas oo dhanka Xukuumaddu iyana ka biya diidday, maadaama uu Farey ka mid yahay eedeysanayaasha ay dacwado uga furan tahay Maxamadda CQS.
Sida ay Keydmedia Online, hore u baahisay, wadahadalada ayaa lagu baraabugay in ay burburayaan, habeen ka hor, kadib markii uu Farmaajo, diiday inuu gorgortan ka galo saddex qodob ee kore, kuwaas oo la rumeysan yahay in xalku dalku ku jiro sida uu u wajaha Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta.
Dadaallo dhex-dhexaadin oo ay sidaan oo kale, garwadeyn ka ahaayeen Lafta-gareen iyo Qoorqoor, ayaa burburay 12-kii bishaan, kadib markii Farmaajo diiday in kiiska caddaalad raadinta Ikraan loo daayo hay’adaha garsoorka, isla-markaana uu si buuxda uga horyimid magacaabidii Ra’iisul Wasaaraha ee Bashiir Goobe.